चोखो मनले देबी माताको पा’उलाई छोएर दर्शन गर्नुहोस ,तपाइको मनोकामना पुरा हुनेछ …! जय माता दि !” – Gazabkonews
चोखो मनले देबी माताको पा’उलाई छोएर दर्शन गर्नुहोस ,तपाइको मनोकामना पुरा हुनेछ …! जय माता दि !”
फेब्रुअरी महिना :यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु निकै बुद्धिमानी हुने गर्छन् । ग्र’ह चालको कारण यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु विवाहपछि पनि भाग्य निकै चम्कन्छ । त्यसकारण फेब्रुअरी महिनामा जन्मने महिलालाई लक्ष्मीको रुपमा लिने गरिन्छ ।अप्रिल महिना :यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु छिट्टै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने गर्छन् । सधै भाग्यले साथ दिने भएकाले उनीहरु प्रगतिको पथमा हुने गर्छन् । विवापछि पनि उनीहरुको कारण पतिलाई शुभ नै शुभ हुनेछ ।
सिन्धुली । हामीलाई देवी देवतामा धेरै बिश्वास गर्छौ । र परम्परा देखि पुजाआजा, दान, धर्म, बर्त हरु गर्दै आइरहेका छौ । नेपाल धार्मिक दृष्टिले पनि बिशेष महत्व बोकेको देश हो । यँहा देखि देवी देवताको मठ मन्दिर हरु पनि छ। त्यस्तै औता मन्दिरको बारेमा भन्न गैरहेका छौ पूर्वी पहाड र मध्य तराईबाट राजधानी भित्रिने सबैभन्दा छोटो दूरी मा रहेको छ बिपी राजमार्ग । जहाँ दैनिक साना ठुला गरि हजारौं सवारी साधन चल्ने गदर्छ,
जुन मार्गलाई जापान सरकार को सहयोग मा निर्माण गरेको हो। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५, मुलकोट नजिकै रहेको रिट्ठे भीरको तल अक्कर भीर र सुनकोशी नदी रहेको छ । काठमाडौंबाट बनेपा–धुलिखेल–भकुण्डेबेसी– नेपालथोक हुँदै खुर्कोट नजिकै रहेको ठाउँ हो रिट्ठे भीर । जुन ठाउँको सडकमा हजारभन्दा बदी ऐनाहरु टाँसेको देख्न सकिन्छ । यो दृश्य देख्ना साथ सबैको मनमा एक किसिमको कौतुहलता पैदा हुनु स्वभाविकै हो।
सडकको भित्ताभरी ऐना टास्नुको पछाडि धेरै कुराहरु लुकेको छ । जब कोही यात्रु होस् अथवा सवारी चालक त्यहाँ पुग्नु अगाडि नै सबैको मनमा एक किसिमको ड’र पैदा हुन्छ । जुन ठाउँ धेरै दु्घ’र्घट’ना हुने गर्दछ । केही तथ्यलाई हेर्दा विसं २०५८ वैशाख २० गते सिन्धुलीबाट काठमाडौं जाँदै गर्दा मुलकोट नजिकै रहेको रिट्ठे भी’रमा बस ख’स्दा १४ जनाको नि’ध’न भएको थियो । २०६८ असोज २६ गते त्यसै ठाउँमा बस ख’स्दा बसका सबै यात्रु ४२ जनाको नि’ध’न भएको थियो ।
त्यसको ठिक छ वर्षपछि २०७६ असोज २६ गते ६ जनाको नि’ध’न भएको थियो । जुन ठाउँमा धेरै यात्रुहरुले ज्या न गुमाएका छन् । हजारौं ऐनाहरु भित्र लुकेका अनेकै रहस्यहरु आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि त्यस ठाउँमा सानो र साघुरो गोरेटो बाटो थियो । बाटो नजिकै एउटा ठुलो सालको रुख थियो । रुखमुनि सानो पोखरी थियो । जुन पोखरीबाट पानी आउथ्यो । मानिसलाई पानी लैजान सजिलो हुन्थ्याे। तर जापान सरकारले सडक बनाउने क्रममा पानी र पोखरी दुवै मासिदियो ।
पोखरीमा देबि छ र देवीको तेति ठूलो सक्ति छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा भएन, जहाँ पूजा आरधना चाहिँ पहिला देखि नै गरिन्थ्यो। त्यसको केही समयपछि एउटा आठ वर्षीया बालिकामा देवी उत्पन्न भइन् र उनले म देवी माता हुँ मलाई तिमीहरुले बस्न दिएनौ, मेरो बस्ने ठाउँ नै भत्कायौ, मेरो टाउको माथि गाडीहरु गुडिरहेको छ । मेरो लागि कसैले पनि मन्दिर बनाइदिएन् । जबसम्म मेरो नाममा मन्दिर बन्दैन तबसम्म म धेरै मान्छेहरुको भो’ग खान्छु भनिन् । स्थानीयहरुले त्यस कुरामा ग’म्भी’र भएनन् ।
त्यसको केही समयपछि यात्रुवाहक वस शुनकोशी नदीमा खस्दा ४२ जनाको नि’ध’न भएको थियो, जसको आ’त्मा’ले शान्ति पाओस् भनेर सप्ताह पनि लगाइदिए स्थानीयहरुले । सप्ताह लागेको बेला एक्कासी एउटी महिलामा देवी उत्पन्न भएर उनले बोकेको भरमा कोशीमा गएर सेतो ढुङ्गा लिएर एउटा रुखको जराको सेतो र रातो कपडाको धोजा बनाएपछि मन्दिर बनाएको स्थानीयहरु बताउँछन् । देवी मातालाई मन पर्ने भनेर ऐनाहरु राखियो । बिस्तारै ऐनाले धेरै संख्या लिन पुग्यो ।